शिल्पा पोखरेलको ता’कतः छविको सम्पत्ति रोक्का, सुवेदीका कार्यक्रम निलम्बन ! – Ramailo Sandesh
शिल्पा पोखरेलको ता’कतः छविको सम्पत्ति रोक्का, सुवेदीका कार्यक्रम निलम्बन !
काठमाडौं– अभिनेत्री शिल्पा पोखरेलले पति छविराज ओझा र सञ्चारकर्मी प्रकाश सुवेदीलाई ‘मा’र’मा पारेकी छन्। ओझासँग सम्बन्ध विच्छेदको तयारीमा रहेकी उनले अदालतमा मानाचामलसम्मको मुद्दा हाली सम्पत्ति रोक्का गराएकी छन्।यहि विषयमा सञ्चारकर्मी सुवेदीले एपी वान टेलिभिजनमा कार्यक्रम चलाएपछि उक्त कार्यक्रम निलम्बन गराउन पोखरेल सफल भएकी छन्। उनले सुवेदीले अदालतमा विचाराधिन रहेको विषयमा कार्यक्रम चलाएर आफूलाई अप्ठ्यारोमा पारेको भन्दै टेलिभिजनको बोर्डमा उ’जुरी गरेकी थिइन्।
बोर्डले सुवेदीले चलाउने गरेका दुई कार्यक्रमहरू ‘ग्ल्या’मर गफ’ र ‘रजतपट’ नि’लम्बन गरेको छ। उक्त कार्यक्रम नरोके टेलिभिजनविरुद्ध नै अदालत जाने तयारी पोखरेलले गरेकी थिइन्। सुवेदीले उक्त कार्यक्रमका लागि पोखरेललाई पनि बोलाएका थिए। तर उनी नबोल्ने भन्दै पन्छिएपछि ओझासँग अन्तरवार्ता गरेका थिए। त्यसअघि अर्को कार्यक्रम बनाएका थिए।
थप समाचार – अभिनेत्री केकी अधिकारी कोरोनाभाइरस संक्रमित भएकी छिन् । उनी भाइरस संक्रमित हुँदा उनी सम्बद्ध फिल्म छायांकन र रियालिटी सो प्रभावित भएका छन् ।अहिले आफूलाई आइसोलेसनमा राखेकी केकीको स्वास्थ्य अवस्था भने सामान्य छ ।
उनलाई कोरोना देखिएपछि छायांकन भैरहेको केकी अभिनित फिल्म ‘घिन्ताङ’ पोस्टपोन्ड भएको छ ।साथै, उनी निर्मात्री रहेको टेलिभिजन रियालिटी सो ‘कमेडी च्याम्पियन’को सिजन २ समेत एकसातालाई पोस्टपोन्ड भएको छ । कमेडी च्याम्पियनले विज्ञप्ती जारी अर्का एक सहभागिलाई पनि कोरोना देखिएको उल्लेख गरिएको छ ।
कमेडी च्याम्पियनको छायांकन अर्को सातालाई पोस्टपोन्ड गरिएको खबर छ । टीमका अन्य सदस्यको पनि कोरोना परीक्षण गरिने भएको छ । संक्रमित हुनेलाई क्वारेन्टिन र आइसोलेसनको पनि व्यवस्था गरिएको कमेडी च्याम्पियनले जनाएको छ ।फिल्म ‘घिन्ताङ’का निर्देशक दीपक श्रेष्ठ पनि कोरोना संक्रमित भएपछि छायांकन रोकिएको थियो ।
मंगलबारदेखि छायांकन सुरु गर्ने भनिएपनि केकीलाई पजेटिभ देखिएपछि छायांकन पोस्टपोन्ड भएको हो ।त्यस्तै पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाह र उनकी पत्नी कोमललाई कोरोना संक्रमण भएको छ। भारतको उत्तराखण्ड राज्यस्थित हरिद्वारको कुम्भ मेलामा सहभागी भएर आइतबार स्वदेश फर्किएका शाहलाई कोरोना संक्रमण भएको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ।
हरिद्वारको कुम्भ मेलामा सहभागी भएर स्वदेश फर्कन अघि भारतमै परीक्षण गर्दा नेगेटिभ आएको र स्वदेश फर्किएपछि पिसिआर परीक्षण गर्दा संक्रमण पुष्टि भएको बताइएको छ। शाह दम्पतीलाई संक्रमण पुष्टि भएपछि कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ सुरू गरिएको मन्त्रालय स्रोतले बताएको छ।
भारतको हरिद्वारमा गंगा स्नान गरेर बैशाख ५ गते स्वेदेश फर्किएका उनीहरुले कोरोना संक्रमण परीक्षण गराएका थिए । करिव २ साता लामो तीर्थयात्रा सकेर स्वदेश आएका पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाह केही समय होम क्वारेन्टीनमा बस्ने बताएका थिए ।उनी प्रत्येक १२ वर्षमा एकचोटी लाग्ने महाकुम्भ भेलामा सहभागी भएर बैशाख ५ गते स्वदेश फर्केका हुन् ।
दुई महिनासम्म चल्ने उक्त मेलाको एउटा मुहूर्तमा एकैदिन ३० लाखभन्दा बढी श्रद्धालुले गङ्गास्नान गरेका थिए। उक्त दिन पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रले पनि शाही स्नान गरेका थिए ।त्यहाँ पूर्व राजालाई हिन्दू सम्राटका रुपमा निक्कै भव्य ढंगले स्वागत आतिथ्य र विदाई गरिएको थियो ।
त्यहा उनले बिशेष अतिथिका रुपमा सम्वोधन पनि गरेका थिए । विमानस्थलमा राजालाई स्वागत गर्नको हजारौंको संख्यामा मानिसहरु उपस्थित भएपछि प्रहरीलाई भिड व्यवस्थापन गर्नको लागि हम्मेहम्मे परेको थियो ।राजालाई स्वागत गर्नको लागि विमानस्थलमा स-साना बालबालिकाहरुलाई विना मास्क लगिएको थियो ।
‘भ्वाइस अफ नेपाल’मा गएका ट्याक्सी चालक कर्णराजकी आमाको ग’म्भिर अवस्थामा उपचार हुँदै